Dargaggoo Indaastirii Muuziqaa Oromoo Guddisuuf Hojjataaru - Curate Oromia
Birraa Gammadii hundeessaa fi abbaa qabeenyaa Vision Entertainment’tiiti. Innis waahila isaa Gammachuu Abirahaam jedhamu waliin ji’oota 11 dura Ameerikaa bulchiinsa Portilaandi irraati kan hojii kanatti seenan.
Aadaan ummata Oromoo bal’aa fi guddaa ta’ee osoo jiru muuziqaalee hojjataman guddinnaa fi bal’inna ummatichaa kan bakka bu’anii miti jedha Birraan.
Fakkeenyaaf godinni tokko rukuttaa muuziqaa tokkoo ol qaba, kuni immoo haalaan irratti hin hojjatamne kan jedhu Birraan haalota kanniinitu akka hojii kanatti seenu na godhe jechuun Curate Oromia’tti himeera.
Birraan akka jedhutu ummanni Oromoo waggoota 100 oliif gabroomuunsaa aartii ummaticha sadarkaa guddaarra akka hin geenneef sababa ta’eera jedha.
“Aartiin Oromoo haala rakkisaa keessa ture. Aartistoonnis dararaa hamaa keessa darbaniiru, albamasaanii bakka itti gurguran hin qaban ture. Manneen muuziqaa biyya keessaas sirbasaanii sababa siyaasaatiif bituurraa dheessu turan. Aartistoonni Oromoo qabsaa’oota, fakkeenya qabsoo Oromooti,” jedha.
Haalonni kunniin hundi ammoo muuziqaan Oromoo sadarkaa guddaarra akka hin geenneef sababa biraati jedha Birraan.
Credit: Birra Gemmedi
Gama kaaniin ummanninuu aartii ofii guddisuurratti hanqinna akka qabus dubbata. Yeroo dhihoo asitti garuu muuziqaalee Afaan Oromoo YouTube irratti namoonni baay’innaan daawwataa akka jiranii fi muuziqaalee gaggaarii ta’an dhaggeeffattootaa fi daawwattoota bira gahaa dhufuusaanii hima Birraan.
Jaallattoonni muuziqaa Oromoo al tokko tokko muuziqaalee Afaan Oromootiin hojjataman qabiyyeesaaniirratti, waraabbii akkasumas muuziqaalee hedduunsaanii wal fakkaatu jedhaa yoo qeeqan ni dhagahamu.
Kun maal irraa kan ka’e jennee Birraa Gammadiin gaafannaan akkas nuun jedhe: “Kun rakkoo gabrummaa fi miidha keessa turuurraati. Aartii jiruu fi jireenya ummata tokkoo ibsa. Hanga ammaa ummanni fi aartistiin Oromoo carraa argatee baay’innaan waa’ee gammachuu, jaalalaa fi bashanansiisu sirbuuf carraa hin arganne.
Dabalataan immoo aartiin Oromoo hedduminnaan siyaasarratti irkata. Kunniin wantoota guddinna aartii Oromoof danqaa ta’aniidha.Inni biraa ammoo, dhageeffataanillee waan gaariirratti xiyyeeffatuurra wantoota xixiqqoo gaarii hin taanerratti xiyyeeffanna.”
Chaanaalonni YouTube muuziqaa fi aartii Oromoo yeroo adda addaatti namootaa gabaafaman (report) godhaman arguun yaadannoo yeroo dhihooti. Vision Entertainment erga hojii eegalee wanti akkanaa isin mudatee beekaa gaafii jedhuuf Birraan akkas jedha: “Hamma ammaatti nu hin mudanne.
Nuti mootummaa Ameerikaarraa hayyama LLC qabna. Yoo haalli akkasiis jiraate mana murtiitti himannee mirga keenna kabachiisuu ni dandeenna.
Inni kuun ammoo YouTube seera mataasaa ‘Community Standards’ jedhamu qaba. Yeroo muuziqaan tokko nu bira dhufu jechoota muuziqicha keessa jiran ‘Community Standards’ cabsuu fi cabsuu dhabuusaanii mirkaneessina. Jechoota muuziqaa san keessan jiran YouTube hin hayyama jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaanii ni ilaalla.”
Gama kaaniin indaastirii muuziqaa Oromoo gama hundaan guddisuu fi sadarkaa muuziqaaleen idil addunyaa bira gahan gahuuf dhaabbannisaanii jabaatee hojjataa jiraachuu himeera.
Derartu A. Gobena
Derartu A. Gobena is a writer who focuses on Oromo issues.
Dhugaadhaa hojii boonsaa hojjeta jiruu warri vision entertainment heddu galatoomaa Kana caalaa jabaadha itti fuufan jedha. Horaa Bulaa Deebanaa!!!
Hujiin arti Oromoodha irratti hinhojatamnee baayyee nuuf hafa kanaafu ‘Vision‘ jajabeefamu qabu akkasumas kan akka isaani kun baayachu qabu.
Nama jabaa jabadhu 🙏
Hojii gaarii hojjatamaa jira
Hojjii bareeda hojjataa jirtuu jabadhaa qomoo koo